ARGENTINA vs CHILE, goormaa la daawanayaa kulanka, halkee ku ciyaarayaan, imise jeer ayay iska hor yimaadeen, Yaa badis badan? Iyo wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka Finalka ee COPA AMERICA – Gool FM
ARGENTINA vs CHILE, goormaa la daawanayaa kulanka, halkee ku ciyaarayaan, imise jeer ayay iska hor yimaadeen, Yaa badis badan? Iyo wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka Finalka ee COPA AMERICA
Byare June 26, 2016
(America) 26 Juunyo 2016. Xulalka Argentina iyo Chile ayaa caawa saqdii dhexe isku qaban doona ciyaarta Finalka Copa America.
Labadan xul ayaa sanadkii la soo dhaafay uun wada ciyaaray Finalka tartankan waxaana kolkaa 4-1 rigoorayaal ku adkaaday xulka Chile kaddib markii ay ciyaarta waqtiga caadiga ah ku idlaatay bar-baro goolal la’aan ah kulan ka dhacay Santiago.
Lionel Messi oo isagu wacdaro muuqata ka dhigaya Copa America ee sanadkan ayaan weligii wax koob oo wayn kula guuleysan xulka Argentina haddaba su’aasha kulanka ayaa ah Messi ma soo afjari doonaa sheekadaa isla markaana maka bixin doonaa xulkiisa baahida koobab la’aanta ee 23-jirsatay.
Haddaba aqriste waxaan halkan kugu heynaa macaluumaad aad uga baahan tahay kulanka xiisaha badan ee labada xul.
Goorma ayaa la daawanayaa kulanka?
Kulanka ayaa la daawan doonaa caawa saqdii dhexe marka ay saacada geeska Africa tilmaameyso 3:00, haddii aan si kale u iraahdo waa waqtiga SUXUURTA.
Halkuu ka dhacayaa kulanka?
Kulanka ayaa ka dhici doona dalka Mareykanka gaar ahaa garoonka MetLife Stadium ee ku yaala bariga Rutherford ee magaalada New Jersey.
Wararka labada Xul?
Weeraryahanka xulka Argentina Ezequiel Lavezzi ayaa gabi ahaan seegi doona kulanka kaddib markii uu ka jabay xusulka bidix ciyaartii uu xulkiisa 4-0 uga soo adkaaday Mareykanka semi-final-ka.
Angel di Maria ayaa la xaqiijiyay taam ahaanshihiisa kulanka waxaana sidoo kale la heli karaa Nicolas Gaitan oo hal kulan oo ganaax ah kaga maqnaa.
Xiddiga qadka dhexe ee Marcelo Diaz ayaa la heli karaa kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac seejiyay ciyaartii semi-finalka uu xulkiisa 2-0 uga adkaaday xulka Colombia.
WAJI KA WAJI, Yaa badis badan labada xul imise jeer ayay kulmeen?
Labadan xul ayaa is qabtay 87-jeer, xulka Chile ayaa adkaaday kaliya 7-jeer halka Argentina uu adkaaday 57-jeer, waxayna bar-baro galeen 24-jeer.
5-tii kulan ee ugu dambeysay oo ay is arkaan labada xulka, 3-ka mid ah waxaa adkaaday Argentina, 1-jeer waa laga adkaaday, 1-ka kalena waa bar baro.
Halka jeer ee laga adkaaday xulka lagu naaneyso Albiceleste ayaa ah ciyaartii final ka Copa America ee sanadkii la soo dhaafay. Is aragoodii ugu dambeeyay ee labada xul waxaa misane 2-1 ku adkaaday xulka Argentina oo waxay isku soo arkeen wareega group-yada ee tartankan iminka maraya FINAL-ka.
SHAXD SUURO GALKA AH EE LABADA XUL:
Argentina (4-3-3 ): Romero, Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Biglia, Mascherano. Banega, Messi, Higuain, Gaitan.
Chile (4-3-3 ): Bravo, Isla, Medel, Jara, Beausejour, Aranguiz, Silva, Vidal, Fuenzalida, Vargas, Sanchez.
W/D: Cabdisamed Maxamed Xasan (Black Yare).
Waa sidee xaalada Isco iyo James Rodriguez ee gudaha Real Madrid?
"Spain ayaa ka walwal badan talyaaniga" - sidaa waxaa yiri Andrea Pirlo